Alternatives Garageband tsara indrindra ho an'ny Android (2020) - App
Na izany aza, mamantatra hoe iza amin'ireo no alternatives Garageband tsara indrindra ho anao?Nahazo ny lamosinao izahay.Paoma. Namoaka an'i Garageband ny Inc tamin'ny 2004. Hita amin'ny sehatra maro samihafa izy io. Ny macOS no mitantana azy, ny iOS no mitantana azy, ary na ny iPadOS aza dia mitantana azy, saingy mbola tsy misy zavatra toa an'i Garageband raha ny amin'ny Android. Inona no hatao amin'ity tranga ity? Aza manahy.
Na dia tsy misy Garageband ofisialy ho an'ny Android aza dia misy safidy tsara hafa betsaka azonao ampiasaina. Ho entinay mamaky ny safidinay tsara indrindra ianao mba ho mora kokoa aminao ny misafidy eo amin'izy ireo.
Garageband dia DAW (Digital Audio Workstation) izay mamadika ireo fitaovana andehanana mankany amin'ny ozin-kira. Manana fitaovana virtoaly ao izy. Azonao atao ny manao karazana naoty amin'ireto zavamaneno ireto nefa tsy mila mitendry azy, noho izany, na dia tsy mpitendry mozika aza ianao dia afaka mamokatra. Ny feo avy any Garageband dia nampiasaina tamin'ny mega-hits an'i Rihanna, Usher, Grimes, sns. Ampiasain'ny mpamokatra EDM, na ny vao manomboka na ny matihanina.
Fampidinana rindrambaiko maimaim-poana 10 maimaim-poana
Fampiharana Android Music Player tsara indrindra
Ireto ambany ireto dia nitanisa ireo safidinay safidy tsara indrindra ho an'ny Garageband ho an'ny AndroidOS.
Safidy ambony ho an'ny safidy Garageband ho an'ny Android (2020):
Jam mpamorona mozika
Fl studio finday
J4T Multitrack mpitam-boky
Ka andao hiroboka amin'ny antsipiriany.
1. Jam mpamorona mozika
Miaraka amin'ity fampiharana ity avy amin'ireo mpamorona Loudly GmbH, azonao atao ny mamorona mozika avy hatrany ary mandefa izany amin'ireo mpampiasa MMJ an-tapitrisany manerantany. Mahafinaritra ny mpampiasa, ary tsy maninona raha vao manomboka ianao na matihanina dia mety tsara ny mampiasa azy. Raha mpampiasa Ex Garageband ianao dia io no safidy tsara indrindra ho anao.
Ny angon-drakitra dia feno tadivavarana avy amina karazana karazana safidy toa an'i EDM, Dubstep, House, Hip-Hop, Rock, Pop, sns.Miaraka amin'ny mixer fantsona valo, tsy misy farany ny azo atao. Afaka mamorona mozika mahafinaritra ianao ary koa mifangaro hira eny am-pandehanana ho an'ny fetin'ny namana.
Ny fampiharana dia naoty 4.6 / 5 ao amin'ny Google Play Store.
Music Maker Jam dia manome andian-dahatsoratra ao anatin'ny fampiharana. Andao hojerentsika ny sasany amin'izy ireo.
Tweak Tempos & harmonies ary ampiasao ny fiatraikany manan-danja toy ny fiakanakana, fanemorana ary ny famerenanana.
Hira Remix. Miaraka amin'ny endri-javatra mahafinaritra mahafinaritra izay ahafahanao mamerina manamboatra làlana amin'ny alàlan'ny Fihomehezana ny fitaovanao.
Ampiasao ny feonao voarindra miaraka amina feon-kira tsy manam-paharoao ary alaharo ny feo mba ho majika.
Mizarà avy hatrany amin'ny haino aman-jery sosialy haingana sy haingana ny hiranao.
Midira amin'ny vondrom-piarahamonina Music Maker Jam manokana, izay manodidina ny 6 tapitrisa ireo hira nakarina tao.
Music Maker Jam dia maimaim-poana alefa amin'ny magazay google play. Na izany aza, misy ny fividianana rindrambaiko hidirana amin'ny endri-javatra premium rehetra.
2. studio n-track
Ny n-Track Studio dia studio fandraisam-peo iray manontolo ao am-paosinao. Azonao atao ny manoratra hira tsy voafetra ary koa ny làlan'ny MIDI. Manana santionany tsy misy mpanjaka izy. Izy io koa dia ahafahanao mampiasa Guitar Amps miaraka amin'ny fanovana Vocal sy Reverbing.
Manana fitaovana virtoaly natsangana izy io, saingy afaka mampifandray zavamaneno ara-batana avy any ivelany ianao raha tianao.
Ny fampiharana dia naoty 4.2 / 5 ao amin'ny Google Play Store.
n-Track dia iray amin'ireo DAW be mpita indrindra amin'ny sehatra Android. Ireto misy lafiny mampiavaka azy
Synths namboarina izay manohana ny làlan'ny MIDI
Ahafahanao manao Reverbing, Chorusing, Flangering, Phasing, Tube Amplifying, Echoing, Pitch Shifting, sns.
Fanitsiana ny paozy sy ny fanamafisam-peo ho an'ny feo malefaka.
Fahafahana mametraka matetika Sampling hatramin'ny 192 Kilohertz.
Plugins isan-karazany hanamafisana ny fidiran'ny fitaovanao
Vondron'ireo mpanakanto an-tsokosoko amin'ny kaloria rehetra.
Ankoatra ny kinova maimaimpoana dia manana famandrihana 3 azonao isafidianana izy ireo
Famandrihana STANDARD:vola $ 0.99 isam-bolana.
Fisoratana anarana natatra:vola $ 1.99 isam-bolana.
Famandrihana SUITE:vola $ 3.99 isam-bolana.
Ity rindrambaiko mpandresy loka ho an'ny Android ity dia hahafahanao miasa amin'ny làlan-kafatra na mamorona làlana tsy manam-paharoa hatramin'ny voalohany. Miaraka amin'ny fisian'ny fonosana santionany maimaim-poana mihoatra ny karazany toa ny Dubstep, House, Trance, Rock, sns, azonao atao ny mamorona sy mametaka ny feon'ny zavatra tianao amin'ny alàlan'ny rantsan-tananao fotsiny.
BandLab dia manana tranokala fitahirizana rahona tsy voafetra ho an'ireo mpampiasa azy. Mahagaga tsotra izao. Tsy mila manahy momba ny fitondrana USB any amin'izay alehanao ianao. Azonao atao koa ny miditra ao amin'ny kaonty Android mankany amin'ny tranokala Desktop ary miasa amin'ireo tetikasanao.
Ny fampiharana dia naoty 4.4 / 5 ao amin'ny Google Play Store.
Mampihomehy ny fampiharana maimaim-poana afaka manome endrika toy izany, andao hanao fitsidihana.
Tonian-dahatsoratry ny fifangaroana 12, novakianao tsara izany, ny dian-tongotra 12 dia azo afangaro amin'ny fotoana iray amin'ny BandLAb Mahagaga tokoa izany ho an'ny fampiharana maimaimpoana.
Fampitaovana MIDI virtoaly mihoatra ny taonina toa ny amponga, Gitara, Kitendry, sns.
Fitaovana Mastering namboarina, izay mahafehy ho azy ny làlana rehetra.
Presets Vocal tsy misy mpanjaka mihoatra ny taonina
Kitapom-peo efa voavidy mba hamokarana làlana vaovao ho an'ny mpamorona amin'ny karazan-karazany maro karazana.
Maimaimpoana tanteraka ny fampiasana ny BandLab.
Mandehana miaraka amin'ny Studio miaraka amin'ny Walk Band. Ity fampiharana ity dia sintonina in-50 tapitrisa mahery ao amin'ny Google Play Store. Miaraka amin'ny synthesizer Multitrack sy ny feo manara-penitra ny studio, dia manome safidy tsara ho an'i Garageband amin'ny Android izy. Azonao atao ny miditra amin'ny zavamaneno hatramin'ny antsasaky taonina ao amin'ilay fampiharana, izay sady milalao amin'ny solo sy chords no mampifandray ara-batana ny kitendry MIDI.
Azonao atao ny manoratra ny feonao manokana, manafatra azy ireo ao anaty app, ary manara-maso azy ireo mba hahatonga azy ireo ho majika.
Walk Band dia nahazo isa 4.2 / 5 ao amin'ny magazay Google Play.
Ireo fiasa lehibe omen'ny Walk Band dia,
Fitaovana toy ny Guitars, Drums, Keyboard built-in.
Fahaizana mamantatra fitaovana mifamatotra ara-batana.
Fiovam-po avy amin'ny MIDI mankany amin'ny endrika Mp3.
Fandraisana feo miaraka amina mic namboarina sy ny fanovana Auto.
Maimaimpoana ny misintona avy amin'ny magazay Google Play ary manolotra fividianana fampiharana.
Ireo goavam-be ao amin'ny Computer DAWs dia manana ny app android hifaninana amin'i Garageband of Apple. Inc. Ny tetik'asa mozika marobe dia azo foronina sy hotehirizina amin'ny fitaovanao Android miaraka amin'ny fampiharana FL Studio. Azonao atao ny manoratra ny feonao mivantana na manafatra ireo efa voarakitra an-tsoratra avy amin'ny fitaovanao ary manampy azy ireo amin'ny gadona mahatalanjona izay azonao noforonina tamin'ny fitaovana natsangana.
Azonao atao ny mametraka plugins izay hanampy ny efa fampiasa amin'ny fampiharana. Tahaka ny mpiara-miasa aminy PC, FL studio mobile dia manana synthesizer avo lenta sy FX maro karazana.
Ny fampiharana dia nahazo isa 4.3 / 5 ao amin'ny Google Play Store.
FL studios mobile dia feno endri-javatra lehibe toy ny kinova Desktop, andao jerena izy ireo,
Ampidiro ireo rakitra WAV, FLAC & MP3
Fanohanana MIDI feno hampifandray fitaovana ara-batana.
FX marobe manatsara ny vokatrao
Fanoratana feo sy fanafarana miaraka amin'ny fanohanana Autotune miaraka amin'ny preset.
Fanafarana MIDI tokana & Multitrack ary koa fanondranana.
Ny vidiny hampiasa ny kinova feno dia $ 14,99. (Misy ny kinova demo).
# 1 Azo alaina amin'ny Android ve i Garageband?
taona:Tsia, Garageband dia misy manokana ho an'ny sasany amin'ireo fitaovana Apple. Na izany aza, misy maro ny safidy hafa mahomby amin'izany, araka ny efa nolazainay tao amin'ny lahatsoratra etsy ambony.
# 2 Misy kinova Desktop an'ny Garageband?
taona:Tsia, toy ny Android ihany, Garageband dia tsy misy amin'ny Desktops izay tsy mandeha amin'ny MacOS. Betsaka ny safidy tsara azo alefa amin'ny birao finday koa, feno fampiasa, ary ny sasany amin'izy ireo dia tsara kokoa noho i Garageband mihitsy.
# 3 Mila fampiharana Garageband ve aho?
taona:Raha ammateur ianao ary te hamorona mozika eny an-dalana dia eny tokoa. Raha manana fitaovana Apple ianao, dia efa napetraka mialoha i Garageband, fa raha mpampiasa android ianao ary te-hanao mozika dia tsy misy fomba ahafahana mihazakazaka Garageband amin'ny fitaovanao. Misy be dia be ny fomba hafa azo soloina azy, notononinay etsy ambony izy ireo. Mety kokoa sy mora kokoa ny mampiasa ireo safidy hafa ireo noho ny mividy fitaovana Apple lafo vidy.
# 4 Iza amin'ireo safidy hafa voalaza no tsara indrindra amin'ny Mastering?
taona:Band Lab no tsara indrindra raha hiran'i Mastering hira. Izy io dia manana sehatra telo ahafahanao mahafehy ny lalanao. Mila manafatra ny fisieo ao ianao, ary ny Band Lab dia hahafehy ny làlanao mandeha ho azy.
Ireo safidy hafa voalaza rehetra dia tsara ary manome fifaninanana henjana amin'i Garageband. Na dia manana ny mahatsara sy maharatsy azy aza ny DAW tsirairay avy dia afaka mampiasa mihoatra ny iray amin'ireto safidy ireto ianao mba hahazoana valiny miavaka. Ny fanaovana izany dia mbola mora kokoa noho ny fahazoana fitaovana Apple ho an'i Garageband. Amin'ny fampifangaroana ireo DAW hafa ireo dia afaka mahazo valiny tsara kokoa noho i Garageband ianao. Aza miasa bebe kokoa, miasa tsara amin'ny fampiharana ireo, ary alaivo ny mozika hahatratra ny besinimaro. Manantena izahay fa nanamora ny fanapahan-kevitrao tamin'ny alàlan'ny tari-dalanay.Aza miandry intsony. Miroboka ao anaty DAWs ary avelao ny mpitendry ao anaty hiroborobo.
Safidy iMovie 5 tsara indrindra ho an'ny Windows
Dr. Dre Rapper malaza - Taona, asa, fiainana tany am-boalohany & maro hafa!
Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny Dokotera Hafahafa ao amin'ny tontolon'ny hadalana!
fampidinana sarimihetsika maimaim-poana tsy misy fisoratana anarana na fisoratana anarana
fanandramana geforce nisy zavatra tsy nety andramo indray ny traikefa geforce
tranokala hijerena sarimihetsika vaovao maimaim-poana
ataovy maimaimpoana ny tadin'ny hiphop amin'ny Internet
sarimihetsika ambony hijerena an-tserasera